कर्णालीको विकासका लागि ‘वार स्पोर्ट’ बनाएर अघि बढ्छौँ – Maitri News
कर्णालीको विकासका लागि ‘वार स्पोर्ट’ बनाएर अघि बढ्छौँ
Mohan Bastola December 21, 2018
महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ अब कर्णालीका दुःख बेचेर, कर्णालीका तस्बिर बेचेर केहीले डलर कमाउने दिन गएको बताउनुहुन्छ । उहाँ कर्णालीको विकासका लागि ‘वार स्पोर्ट’ बनाएर अघि बढ्ने पनि दाबी गर्नुहुन्छ । शुरुका दिनमा कर्मचारी अभावका कारण निकै समस्या भएको बताउने शाही अब विस्तारै सकारात्मक दिशामा अघि बढेको पनि बताउनुहुन्छ । शाहीसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
मुलुक अहिले संघीय संरचनामा अघि बढेको छ । तर, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका कारण प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा निकै समस्या भएको छ भनिएको छ । तपाईँ त कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री । हो, त्यहाँ पनि त्यस्तो समस्या देखिएको छ ?
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो काम हामीले चुनाव सम्पन्न गर्यौँ । हामीले चुनाव सम्पन्न गर्नु अघि नै हामीले सके दुई नभए पनि एउटा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । त्यो भनेको प्रशासनिक संरचनाहरु र कर्मचारीहरुको विन्यास । यी काम हामीले चुनाव अघि नै गर्नु पर्ने थियो । हाम्रो त्यसमा गम्भीर कमजोरी भएकै हो । हामीले चुनाव सम्पन्न गर्यौँ । सरकार पनि बनायौँ । अझ स्थानीय तहको एक वर्ष अघि र प्रदेश अनि संघीय तहको एक वर्षपछि निर्वाचन भयो । हामीले अहिले स्थानीय तह भन्यौँ पहिला स्थानीय निकाय थियो । त्यसैले हामीले पूरै संरचना नै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था पनि थिएन । तर, हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान दिएनौँ । कमजोरी त्यहाँ पनि भयो । हामीले केन्द्रीय सरकारमा जे संरचना थियो त्यसैलाई प्रयोग गरेर हामीले स्थानीय तहको समस्या हल गर्न सक्ने अवस्था पनि थियो ।
भनेपछि त्यस्ता कुरामा तपाईँहरुको ध्यान जान सकेन र अहिले अन्योलता छाएको छ ?
हो, विल्कुल । अहिले त्यस्तै समस्याले गर्दा हामीलाई केही कठिनाई भएको छ । मैले अघि पनि भने । स्थानीय तह भनेको त्यति धेरै कठिनको कुरा भएन । यद्यपि केही कमजोरी त भएन नै । तर, जहाँसम्म प्रदेश भन्ने छ । त्यो चाँहि बिल्कुल नयाँ संरचना हो । यो संरचना अघि बढाउन चाँहि निकै मुस्किल भएको छ । मेरै प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मैले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिदैँ गर्दा मेरो कार्यकक्ष समेत थिएन । मैले क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको एउटा कोठामा सपथ लिएको हुँ । क्षेत्रिय प्रशासकले मलाई पदभार ग्रहण गराउनु भएको थियो । त्यसपछिको करीब एक हप्ता मैले होटलमै बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो । मेरो बस्ने ठाउँसम्म थिएन भनेपछि त्यहाँ संरचना हुने कुनै कुरै भएन । हामीले विस्तारै हामी बस्ने कुर्चीदेखि कोठा र टेवुलसम्म व्यवस्था गर्दै गयौँ ।
तपाईँहरुलाई कोठा र कुर्चीको त अभाव थियो भनेपछि त कर्मचारीबारे त झन समस्या हुने नै भयो नि होइन ?
हो, हामीले निकै समस्या झेल्नु पर्यो । हामीलाई आवश्यक कर्मचारी न स्थानीय तहबाट पठाउने काम भयो । न त माथिबाट नै प्रयाप्त रुपमा पठाउने काम भयो । हामीले निकै मुस्किलका साथ काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । हामी, सचिव विहीन, कर्मचारी विहीन अवस्थामा रहनु पर्यो । कार्यालय सहयोगीको समेत व्यवस्था नहुँदा कति समय त चिया खान मन लाग्दा आफैँ चिया पकाएर खानुपर्ने अवस्था समेत आयो । यी सबै कारणले गर्दा पनि योजना कार्यान्वयनका लागि सबै भन्दा जटिलता प्रदेश सरकारलाई छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । अहिले पनि कर्मचारीको अभाव छ । अहिले पनि कतिपय विभागमा सचिव छैनन् । प्राविधिहरुको अहिले पनि अभाव छ । हामीले केही सीप नचलेपछि अहिले सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई अघि बढायौँ । तर, तत्काल अख्तियारले पत्र काटिहाल्यो । यस्तो प्रकारको जटिलता प्रदेश सरकारलाई छ । बजेट पठाइएको छ । बजेट कार्यान्वयनको सबै भन्दा ठूलो चुनौति छ ।
प्रधानमन्त्रीज्युले यी सबै समस्या हल गर्ने भनेर नै अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बोलाउनु भएको थियो । बैठकमा यी विषयमा पनि छ छलफल भयो होला नि ?
हामीले यी विषयलाई गम्भीर ढंगले राखेका छौँ । कि त संघले बजे कार्यान्वयनका लागि अहिले तुरुन्तै काजमै भए पनि कर्मचारी पठाउनुपर्छ । होइन भने हामी तल सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी राख्न पाउने भनेर हामीलाई एउटा निर्णय दिनुपर्छ भनेर भन्यौँ । यसलाई प्रधानमन्त्रीज्युले पनि सकारात्मक रुपमा लिनुभयो ।
अहिले पनि कर्णालीको दुःख बेचेर, कर्णालीको तस्बिर बेचेर एनजीओ, आइएनजीओ मालामाल भए । तर, सुन्दर कर्णालीका पीडा ज्यूँका–त्यूँ भन्ने भनाई पछि छ । तपाईँ कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री । त्यहाँका जनताले अबचाँहि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म आयो है भन्ने अनुभूति गरेका छन् ?
जनताले सबै भन्दा बढी अपेक्षा यो व्यवस्थाबाट कर्णालीवासीले बढी गरेका छन् । यो संघीय व्यवस्था कर्णालीवासीका लागि धेरै उपयोगी होस भन्ने उनीहरुको पनि चाहना छ । कर्णालीवासीको यो अपेक्ष र चाहनालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । हामीले कर्णालीवासीको अपेक्षालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने चुनौति पनि त्यत्तिकै छ । त्यहि भएर हामी संभावनाको खोजीमा लागेका छौँ । के–के सम्भावना छन् ? हामी अहिले त्यसैको खोजिमा लागेका छौँ । कर्णालीको परिचय जे थियो । त्यो बदल्नु छ अहिले । कर्णालीको परिचय अहिले गरिब र विकट भन्ने छ । हामी सबै भन्दा पहिला यो परिचय बदल्न चाहन्छौँ । अहिले पनि कर्णालीका विकट र गरिबीका तस्बिर विकिरहेका छन् । कर्णालीको दुःख बेचेर डलर कमाउने काम धेरैले गरेका छन् । अब यसो हुँदैन । हामी कर्णाली हिजो गरिब थिएन, आज गरिब छैन र भोलि पनि गरिब हुने छैन भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौँ ।
कर्णाली विकट पनि होइन । कर्णाली प्राकृति सौदर्यताले धनी प्रदेश हो । यहाँ रारा छ । यहाँ बहुचर्चित र ऐतिहासिक मन्दीर छन्, ताल छन्, जडिबुटी छन् । त्यसैले कर्णाली स्वर्ग हो । किम्बदन्ती अनुसार पनि यहाँ ठूला–ठूला भगवानहरु नाथहरु बस्ने ठाउँ हो । भगवान त नर्कमा बस्दैन थे भन्ने छ । उनीहरु स्वर्गमै बस्थे । यस्तो ठाउँलाई विकट भनेर बेच्ने काम भैरहेको छ । अहिले पनि कुनै कर्मचारीलाई धम्की दिनुपर्यो भने ‘तँलाई कर्णाली पुरउनु पर्ला नि ? भनेर सजाय दिने जस्तो गरिन्छ । त्यो होइन । हामीले प्रकृतिको बरदान पाएको छौँ । यो हाम्रा लागि भाग्यको कुरा हो । हामी अहिले त्यसको उपयोग कसरी गर्न सक्छौँ भनेर लागेका छौँ । मरुभूमिमा वस्ती बसाएका विश्वका धेरै देश हरौँ न । अनि हामीले यो स्वर्गलाई गरिब भन्ने ? हामी फेरि पनि भन्छु– ‘हाम्रो दिमागमा गरिब भनेर बसेको चिजलाई नै सबै भन्दा पहिला हटाउनुपर्छ ।’
तपाईँ कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि तपाईँले बनाएका योजना के–के छन् ?
सबै भन्दा पहिला त हामीले यो वर्ष रारा पर्यटन वर्ष भनेका छौँ । त्यो भनेको कर्णाली चिनाउने कुरा हो । दोस्रो हामी कर्णालीका सम्भावनाको खोजीमा छौँ । हामीले यो वर्षलाई खोज–अनुसन्धान र ज्ञानको वर्षका रुपमा लिएका छौँ । त्यो सँगै हामीले कानुन निर्माणलगायतका कुरालाई पनि ध्यान दिएका छौँ । मैले अघि पनि भने । हामी कर्णाली प्रदेशका सम्भावनाका बारेमा के छ भनेर हामी गहिरो अध्ययनमा लागेका छौँ । हामी गुरु योजना नै बनाएर अघि बढेका छौँ । हामी विज्ञहरुको समूह बनाएर पनि अघि बढेका छौँ । हामी अब कर्णालीको विकासका लागि ‘वार स्पोर्ट’ बनाएर अघि बढ्छौँ ।
Previous Previous post: जनतामारा विकास चाहिँदैनभन्दै सडकपीडितहरु सडकमा
Next Next post: गौतमप्रति लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो– ‘बैठकमा अशोभनिय काम नगर्नूहोस्’